Donald J Trump's opinions of vocational education | E-Learning Myanmar and Training Centers | Pro Net
၂၀ ဇွန်နဝါရီ ၂၀၁၇ မှာ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို၍ အမေရိကန်သမ္မတ ရာထူးကို လက်ခံရယူခဲ့သော အမေရိကန်သမ္မတ Donald J Trump သည် သူ၏ မဲဆွယ်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည် (campaign promise) ကတိစကားများအနက် “Job”, “Job”, “Job” သည် သူ၏ အရေးအကြီးဆုံး ၁ ကနေ ၃ အတွင်းရှိသော Agenda ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းနယ်ပယ် (Industry) များသည် အမြဲတမ်းတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့်အားလျှော်စွာ၊ အလုပ်အများစု၏ အတတ်ပညာလိုအပ်ချက်များသည်လည်း လွန်ခဲ့သော 10 နှစ်ကနှင့်ယခုအချိန် များစွာမတူညီနိုင်တော့ပါ။ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ (Sector) လုပ်ငန်းရှင်များသည် ကျောင်းပြီးသူ၊ Master ရထားသူများထက်စာလျှင် လုပ်ငန်းလစ်လပ်နေရာအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကိုသာ ငှားရမ်းလိုကြပါသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံသည် အဆိုပါကို ရှေးဦးစွာကပင် ကောင်းစွာသိရှိနားလည်၍ လုပ်သားပြည်သူများကို Vocational Education စနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့၍ ယနေ့အခါတွင် စီးပွားရေး 4th အကြီးဆုံး စက်မှုနိုင်ငံကြီးအဖြစ် နိုင်ငံပေါင်း 195 နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်ရရှိခဲ့ပါသည်။
အကျဉ်းချုပ်ဆိုသော် multi billionaire ဖြစ်သော အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ်သည် ပြည်သူများအလုပ်ရရှိစေရေး “Job”, “Job”, “Job” ကို အထောက်အကူဖြစ်စေသော Vocational Training ၏ အရေးပါပုံကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်၍ Germany ဝန်ကြီးချုပ် Angela Merkel နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အရင်ဦးဆုံးထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
Referred to: In one press conference (3/17/17) Trump Said, “German and American companies to discuss workforce development and vocational training. Germany has done an incredible job training the employees and future employees and employing its manufacturing and industrial workforce it’s crucial that we provide our American workers withareally great employment outlook”
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာလုပ်သားပြည်သူများကော Vocational Education အရေးပါတယ်လို့မြင်ပါသလား???
ဒီဇင်ဘာ 3, 2017
0တုံ့ပြန်မှု "ဘာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတ Donald J Trump က Vocational Training ကို အရေးကြီးတယ်ထင်ရတာလဲ။"